Wasiirro iyo Xildhibaanno ka tirsan dowladda F.S oo ku baaqay wax ka qabashada xaalladda abaareed gobolka Gedo – Radio Muqdisho
Wasiirka ku xigeenka Wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Xukumadda Federaalka Soomaaliya Cismaan Libaax Ibraahin iyo Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Batroolka Soomaaliya Maxamuud Cabduqaadir Hilaal ayaa ku booriyay Hay’adda ku shaqada leh biyaha iyo qof walba oo Soomaali ah inay ka qayb qaataan wax ka qabashada xaaladda abaareed ay ku sugan yihiin bulshada ku dhaqan gobolka Gedo.
Roob yarida labadi xilli ee lasoo dhaafay ayaa sababtay in abaaro ba’an ay ka dhacaan deegann ka tirsan maamul goboleedka jubaland, waxaana Maalmahii la soo dhaafay qaylo dhaan xooggan ka soo yeeraysay gobolka Gedo oo ay haatan ka jiraan biyo yari iyo baad la’aan, ka dib markii ay gureen warihii biyaha.
Waxaa soo kordhaya dad barakacayaal ah oo soo beegsanaya xerooyin ku yaalla dagmada Bardheere iyo deegaanno kale oo ka tirsan gobolka gedo, kuwaas oo u baahan in lala gaaro gar gaar degdeg ah.
Xildhibaanno iyo Wasiiro heer Federaal ah ayaa shir jaraa’id ay ku qabteen magaalada muqdisho kaga codsaday dowladda Soomaaliya iyo jaaliyadaha ka soo jeeda gobolka Gedo in ay wax ka qabtaan xaaladda culus ee ka taagan deegaannadaasi.
Gobolka gedo ayaa ka mid gobolada ugu baaxadda wayn ee dalkeenna Soomaaliya,waxaana sidoo kale uu xuduud la leeyahay dalalka Itoobiya iyo Kenya, hase yeeshe waxaa isu kaashaday abaaro xiriir ah iyo qalalaase kooxaha nabad diidka ka wadaan deegaanada qaar ee gobolkaasi.
Ciidamada Qaranka oo toogasho ku dilay dhagar qabe Qarax aasayay